.(၃) လအရွယ်ကတည်းက ခြေထောက်ဒဏ်ရာနဲ့ သမီးလေးကို လှလှလေးဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ. – Askstyle
သရုပ္ေဆာင္ ခုိင္နွင္းေဝကေတာ့ ေတာ္ရံုသူမလုပ္နုိင္တဲ့ ပရဟိတအလုပ္ေတြကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါနစ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွမွာလည္း ကေလးအေယာက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနတဲ့ ခုိင္နွင္းေဝက လစာမရ၊ နားရက္မရိွတဲ့ ပရဟိတအလုပ္ကို စြမ္းစြမ္းတမံ လငုပ္ကိုင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြမ်ားစြာကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားရတဲ့ ခိုင္နွင္းေဝက သူမရဲ့ ကေလးေတြတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို ပရိသတ္ေတြနဲ့ မိတ္ဆက္ေပးေနျပီး ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း သူမရဲ့ ေဂဟာကို (၃) လအရြယ္နဲ့ ေရာက္ရိွလာတဲ့ သမီးေလး ခိုင္ညမိုးေမကို မိတ္ဆက္ေပးလာပါတယ္။
ခိုင္နွင္းေဝက “ခိုင္ညမိုးေမ (ခ) မမ ညည … မိုးေတြ အရမ္းရြာ တ့ဲ ညႀကီးမွာ (3)လ သမီး န႔ဲ ေရာက္လာလို႔ “ခိုင္ ညမိုးေမ” လို႔ နာမည္ေပးထားတာပါ… လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္လို႔ ေျခေထာက္ အ႐ိုး ကို ခြဲစိတ္ကုသထားရျပီး ခုေတာ့ မမ ညည အပ်ဳိႀကီး ျဖစ္ေနပါပီရွင္.”ဆိုျပီး (၃) လအရြယ္ကတည္းက ေျခေထာက္ဒဏ္ရာနဲ့ သမီးေလးကို လွလွေလးျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသလာပါတယ္။
မိဘေမတၱာကို သူစိမ္းတစ္ေယာက္က ဘယ္လိုမွမမွီနိုင္ဘူးဆိုေပမယ့္ ခိုင္နွင္းေဝကေတာ့ မိဘေတြကိုယ္တိုင္က စြန့္ပစ္သြားၾကတဲ့ ကေလးေတြကို မိခင္ရင္းသဖြယ္ က်န္းက်န္းမာမာၾကီးျပင္းလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
(၃) လအရွယ်ကတည်းက ခြေထောက်ဒဏ်ရာနဲ့ သမီးလေးကို လှလှလေးဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေကတော့ တော်ရုံသူမလုပ်နိုင်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ကလေးအယောက် လေးဆယ်ကျော်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက လစာမရ၊ နားရက်မရှိတဲ့ ပရဟိတအလုပ်ကို စွမ်းစွမ်းတမံ လငုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေများစွာကို ပြုစုပျိုးထောင်ထားရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ ကလေးတွေတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနေပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း သူမရဲ့ ဂေဟာကို (၃) လအရွယ်နဲ့ ရောက်ရှိလာတဲ့ သမီးလေး ခိုင်ညမိုးမေကို မိတ်ဆက်ပေးလာပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေက “ခိုင်ညမိုးမေ (ခ) မမ ညည … မိုးတွေ အရမ်းရွာ တဲ့ ညကြီးမှာ (3)လ သမီး နဲ့ ရောက်လာလို့ “ခိုင် ညမိုးမေ” လို့ နာမည်ပေးထားတာပါ… လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ ခြေထောက် အရိုး ကို ခွဲစိတ်ကုသထားရပြီး ခုတော့ မမ ညည အပျိုကြီး ဖြစ်နေပါပီရှင်.”ဆိုပြီး (၃) လအရွယ်ကတည်းက ခြေထောက်ဒဏ်ရာနဲ့ သမီးလေးကို လှလှလေးဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြသလာပါတယ်။
မိဘမေတ္တာကို သူစိမ်းတစ်ယောက်က ဘယ်လိုမှမမှီနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် ခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က စွန့်ပစ်သွားကြတဲ့ ကလေးတွေကို မိခင်ရင်းသဖွယ် ကျန်းကျန်းမာမာကြီးပြင်းလာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။